दसैंमा घर जाने हो ? यसरी बुक गर्नुहोस् अग्रिम टिकट — Sanchar Kendra
दसैंमा घर जाने हो ? यसरी बुक गर्नुहोस् अग्रिम टिकट
काठमाडाैं । नेपालीहरूको मुख्य पर्व दसैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाबाट गाउँ जानेहरूका लागि सरकारले यातायातको सहज व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आगामी १० असोजबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने तयारी गरिएको छ ।